'विप्लव'को बन्दले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? हेर्नुहोस भिडियोमा - Kendrabindu Nepal Online News
‘विप्लव’को बन्दले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? हेर्नुहोस भिडियोमा
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव देशभर परेको छ ।विभिन्न क्षेत्रमा सवारीसाधनहरुमा आगजनी गरिएका छन् भने बम र शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन् । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएपनि कतिपय विद्यालय भने आज बन्द रहे । त्यस्तो अप्रिय घटना भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा सवारी साधनमा आगजानी, बम विस्फोट, तोडफोड बाहेक मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीले देशका विभिन्न ठाउँबाट बन्द गराउँदैं हिडेका विप्लव कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मकवानपुर, कैलाली, बुटवल, दाङ, प्युठान, पोखरा, रुकुम पूर्व, बाजुरा लगायतका जिल्लामा बम विस्फोट, सवारी साधनमा आगजानी, तोडफोड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कैलालीमा विवाहको बसमा नै आगजानी गरेको छ । आगजानी गर्ने तीन कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
विप्लवको बन्दमा काठमाडौंमा ट्राफिक जाम (भिडियोमा)
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विप्लवद्वारा नेपाल बन्दको घोषणा